Kusukela ngonyaka nonyaka sisatshiswa yizifo ezihlukahlukene zezifo. Ekuqaleni kwakungumkhuhlane wezinyoni, khona-ke umkhuhlane wezingulube, ozohlala ungumfihlakalo esikhathini esizayo. Kodwa, ngesikhathi esifanayo, i-spectrum yemithi elwa namagciwane, kuhlanganise nemithi yokulwa negciwane, ishintsha kancane.
Kuze kube manje, kunamathuluzi amaningi ahlukene adluliselwayo futhi anikezwa, ikakhulukazi ngesikhathi sezinga eliphezulu lezifo zokuphefumula. Futhi abantu banamuhla kudingeka baqonde lolu lolwandle lwemithi, ngoba akubona bonke abanokusebenza okuthembekile futhi baholela emiphumeleni emihle.
Ngokuyinhloko, ngifuna ukwabelana ngolwazi mayelana nomuthi we- antiviral, njengo-Arbidol. Kuyinto evamile phakathi kwabantu futhi sekuyimakethe iminyaka engaphezu kwengu-15.
I-Arbidol (i-Arbidolum) iyisidakamizwa sokulwa namagciwane esiyisidakamizwa se-interferon futhi sinomphumela wokuzivikela. I-Arbidol ayisebenzisi nje kuphela ngezinhlobo ezahlukene zegciwane lesandulela ngculaza, kodwa futhi neparinfluenza, igciwane lesifo sokuphefumula i-syncytial, i-rotavirus nezinye izifo ezithathelwanayo eziphefumulayo.
Umthelela wayo we-antiviral unikezwa ngokunciphisa ukungena kwegciwane lesandulela ngculaza ibe yileli cell cell host, ukuze igciwane lingakwazi ukungena esitokisini bese landa khona.
Isidakamizwa sisetshenziselwa ukwelashwa kwalesi sifo, futhi ukusebenza kwayo okuphawulekayo kubonakala ezinsukwini ezintathu zokuqala kusukela ekuqaleni kwesifo, kanti igciwane selivele lingaphakathi kwamaseli futhi alikwazi ukubhekana nesenzo se-arbidol, kanye nokuvimbela lesi sifo phakathi naleso sifo, njengoba sinomphumela wokuzivikela futhi kudala ukukhiqiza I-interferons yabantu.
Mayelana nokubuyekezwa kwezidakamizwa ze-arbidol zezingane zakudala kunesimo esihle, njengoba sekuzibonakalise ngokweqile eminyakeni eminingi yokusebenza njengesidakamizwa esiwusizo sokulwa negciwane lesandulela ngculaza, i-ARVI, i-herpes, njll. Ukusebenza kahle kakhulu ngokuphathwa kokwelashwa okufika ngesikhathi nokusebenzisa kahle izidakamizwa. Kubantwana bezingane, kubaluleke kakhulu ukuthi i-arbidol ingasetshenziswa kubantwana abaneminyaka engama-2, okuyisici esibaluleke kakhulu ekusetshenzisweni kwayo emisebenzini yezingane.
Odokotela-abathintekayo mayelana nokubuyekezwa kwezidakamizwa ze-arbidol banikeza kuphela okuhle. Bakhuluma ngokubaluleka kwalesi sidakamizwa esikhathini sethu, lapho isivikelo somzimba esikulesi sizukulwane esincane singencane futhi singathembeki, futhi kubalulekile ukuqinisa ingculazi nokwandisa ukumelana kwezinto eziphilayo ezinxenyeni ezihlukahlukene ezithathelwanayo.
Abathengi abanjalo ababesetshenziselwa ukuphatha izibuyekezo ze-arbidol banikezwa ezihlukahlukene, ngenxa yokuthi ikakhulukazi izici ngabanye. Iningi lezibuyekezo lihle, ngoba abanye abazali baqala ukuphatha izingane zabo ngokusebenzisa i-arbidol, bese bexhuma izinsimbi ezisele ezisele. Abaningi bathatha imithi yokuvimbela, ikakhulukazi phakathi nesikhathi sokwehla kwesimo se-epidemiological.
Kukhona nokubuyekezwa okungalungile lapho iziguli ezisebenzisa i-arbidol azitholanga umphumela oyifunayo.
Ngempela, kukhona ukubekezelelana komuntu kumuthi, okungazibonakalisa ngezindlela ezahlukene, isibonelo, ukusabela okweqile, okuyinto eqinisweni kuboniswa njengomphumela wecala. Empeleni, akekho umuthi ohlinzekwa ngukuphepha kulokhu.
- abadala nabantwana abangaphezu kweminyaka engu-12 - 200 mg (2 capsules arbidol 100 mg)
- izingane ezineminyaka engu-6-12 ubudala - 100 mg
- Izingane ezineminyaka engu-2-6 - 50 mg
Uma, emva kwakho konke, unenkinga ekusetshenzisweni kwalesi sidakamizwa se-anti-virus, kungcono ukusebenzisa i-analogue ye-arbidol ekwelapheni: i-Interferon, i-Anaferon, i-Amantadine, i-Remantine, i-Amiksin, njll.
Isilinganiso senhliziyo. Incazelo
Workshop on isiRashiya: iyini contiguity